Uvavanyo lwe-LG Optimus Black (II) | I-Androidsis
el_uliulius | | LG, Iiselfowuni, Reviews
Emva kwe icandelo lokuqala apho sithetha khona malunga nenxalenye ebonakalayo yesiphelo, izixhobo zekhompyutha kunye namacandelo, kweli candelo lesibini Makhe sithethe kancinci malunga nokusebenza kwefowuni, isoftware kunye namava omsebenzisi ukuba iyasinika.
Esi siginali sibandakanya Inguqulelo ye-OS OS 2.2.2. Le nguqulo yeFroyo yeyakutshanje kule nguqulo. Ukuphuculwa kwesonka sejinja? Akukho mntu waziyo (ukubheja kwamkelwe). Ngale nguqulo yenkqubo yokusebenza i-terminal ingaphezulu kokulungileyo. Akukho micimbi yokuhambelana kwenkqubo, kodwa kunjalo, uphelelwa zizinto ezinomdla ngaphezu kwevidiyo / ukhetho lweaudiyo kwiGtalk kunye nezinye, kwaye ke, gcina i-terminal ngokhetho lwamva nje kunye nokhuseleko lwenkqubo kaGoogle.
El Indawo yemizobo yefowuni iyafana naleyo ye-LG Optimus 2x. Ilula kwaye iluncedo. Akukho frills igqithileyo ngokweeopopayi kunye nemizobo ithatha ukuba. Abanye widgets, eziyimfuneko ukuze ungazalisi idesktop yakho ngezikrini kwaye ibhetri idonsa ngokukhawuleza. Unako ukongeza iiwijethi zakho ezizezakho ngesinye sezicelo ezininzi ezikwiNtengiso kwaye ezibandakanya iiwijethi.
I-LG ibandakanya Iinkqubo ezenzelwe wena zonxibelelwano lwentlalo, ezinje nge-Twitter okanye i-Facebook, kwaye yintoni ukubanakho ukuyiqwalasela ukuze ihambelane nabafowunelwa be-ajenda kunye neeprofayili zethu zentlalo. Ibandakanya izicelo ze-LG ezifana Uqoqosho, uMcebisi ngeApp okanye usetyenziso lwemozulu, eya kukuvumela ukuba usebenzise ifowuni yakho ngcono. Izisa ukhetho lokusebenzisa inkqubo «Umnxeba okude»Oku kukunika ithuba lokufumana uncedo olukude kwi-LG yakho ukuze bakwazi ukukunceda kwinkxaso yobuchwephesha. Kuza 'SmartShareeya kukuvumela ukuba uqhagamshele izixhobo ezihambelanayo ukuze ukwazi ukwabelana ngomxholo wemultimedia ngonqakrazo olunye. Ewe kuza nezicelo zemultimedia zokudlala iaudiyo kunye nevidiyo, igalari yemifanekiso, kunye nayo yonke ifayile ye- Iiapps zikaGoogle, njengeGtalk, iGmail okanye iYouTube. Qaphela, ukuba kwenzeka omnye umntu, ukuba ababanjwanga bengalindelanga, ukuba kubonakala ngathi inkqubo ye-imeyile eziswa sisiphelo, inika iingxaki ngeeakhawunti ezithile ze-imeyile zeMS. I-imeyile yenkampani ayisebenzi kum nakwinto endikwazileyo ukuyiqinisekisa, nokuba ayingomntu endisebenza naye. Kuya kufuneka ulumke ngale nto ukuba uza kusebenzisa esi siginali emsebenzini wakho.
Ikhamera isebenza kakuhle, nangona kunzima ukukuqhela ukusebenza kwayo (ngakumbi abo bavela eSense). Inkqubo ye- imifanekiso inomgangatho ongaphezulu kokwamkelekileyo wokuthetha ngenzwa ye-5MPx. Ikhamera yangaphambili ye-2MPx isebenza kakuhle ekubizeni ividiyo ngokuthumela imiyalezo yeenkqubo zokusebenza.
Kuqala kunzima ukufumana zonke iinketho ezikhoyo kwifayile ye G iqhosha, kunye namathuba okubonelela. Ndiyithandile into enokwenzeka ukufikelela ngqo kwikhamera ngeqhosha likaG ngokushukumisa nje ifowuni. Kuyanceda ukuba isikrini sijikelezwe xa sikhangela.
Khankanya ukusebenza kwe 4, NOVA screen oko kuzisa ifowuni. Kuqaqambe ngokungaphandle ngaphandle. Awuyi kuba nangxaki ukubona ukuba ithini kwisiphelo sendlela kulo naluphi na uhlobo lweemeko zokukhanya onazo. Kuyabulelwa ngoku ehlotyeni ukuba kukho ilanga elininzi kwaye kwiifowuni ezininzi akunakwenzeka ukuba ucofe inombolo ukufowuna.
Ndimele nditsho ukuba ndiye ndaqaphela ukuba njengezinye ii-HTCs, esi siginali ikwaphulukana nophawu lweWiFi ukuba ibanjiwe phezulu. Ayisiyonto ingako, kodwa kwiimeko zokugubungela kakubi i-WiFi inokubaluleka. Okwangoku ndiqaphele ingxaki yokusebenzisa umqondiso we-B / G. Mhlawumbi, njengakwezinye iifowuni, kwi-WiFi N ayibonakali.
Okokugqibela, jonga kwakhona Ibhetri ayinikezeli ngomthamo omkhulu njengoko bendilindele. I-1500mAh kufuneka inike inkululeko engakumbi Ukusuka apho ndizama le fowuni. Andiqinisekanga kodwa kunokuba kungenxa yesikrini se-NOVA, nangona i-LG ibanga ukuba izikrini ze-NOVA zisebenzisa ngaphantsi kwee-LCD kwezinye iifowuni. Kuya kufuneka ndiqhubeke kule nkalo ukufumana umbono ocacileyo kumthamo webhetri.
Ngokuphathelele kwimidlalo nakwabanye, ndikwazile ukufaka umdlalo weGameloft HD ukuze ndikwazi ukuvavanya ukusebenza kwefowuni. Akukho lag okanye naluphi na uhlobo lwengxaki yokudlala kuyo. Ngemidlalo yasimahla, ewe ungonwabela kangangoko ufuna. Unayo imemori eyaneleyo kwifowuni ukufaka ezimbalwa.
Ukwenza i- Niselo kunye Quadrant sifumana amanqaku soloko usondele kumanqaku ayi-1300. Eli nqaku libangela ukuba libekwe ngaphezulu kweHTC Desire S, okhuphisana naye ngqo. Ifumana iziphumo ezifanayo kwicandelo lomzobo nangona liphambili kwicandelo lezixhobo.
Ukushwankathela, Ngaba ndingacebisa kubahlobo bam ukuthengwa kwesiphelo? Uninzi lwazo luyakwenza. Izuza ubukhulu bayo, ubunzima bayo, kwaye ngaphezulu kwako konke, isiqwenga sesikrini. Ukuqaqamba ngaphandle kuyamangalisa. Ijongeka intle kakhulu. Ukuphulukana namanqaku ngokwenkqubo yokusebenza. Kuya kufuneka ukuba iphume neJinja sele isemarikeni, nangona bebanga ukuba bayayihlaziya. Inkqubo ye- Elula yenza ukuba kubonakale ngathi izixhobo ezisetyenzisiweyo ziya kuba zezomgangatho ongekho mgangathweni, kodwa akukho nto iqhubeka kwinyani, ine ukugqiba okuhle kakhulu. Ngokuqinisekileyo, le fowuni xa ithelekiswa ne-cores ezimbini ayinanto yakwenza nayo ngamandla e-hardware, kodwa kwiimeko ezininzi, ingaphezulu kokuhambisa. Iya kuba ngumncintiswano we-Desire S ekhankanywe ngasentla, okanye iinguqulelo ezintsha zeGalaxy S okanye imodeli yosapho lweXperia.
Ifowuni elungileyo evela kwi-LG eqinisekileyo ukuba ngumkhuphiswano onzima wentengiso ye-Android esinayo ngoku.
Ndikushiya kuvavanyo lwekhamera emnyama yeOptimus:
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Uphononongo lwe-LG Optimus Black (II)
UJoaquin Vacas sitsho
Iibhentshi zilahlekisa kakhulu
I-GPU yi-SGX 530, njengeGPS SCL okanye i-Motorola Droid.
Kwelinye icala, loo mnqweno ukudlula oku, iibhentshi ziyahluka kakhulu.
Phendula iJoaquin Vacas
Uhlaziyo kwi-Gingerbread "luqinisekisiwe" yi-LG amatyeli aliqela ngo-Septemba.
Kuhamba kakuhle kakhulu, nangona ulawulo lwe-RAM alulunganga kwaphela (ukuvula izinto ezahlukeneyo kuqala ukuya kancinci kwaye kubi), kwaye akukho nkxaso ivela eluntwini. Okwangoku, akukho maROM okanye nantoni na enzulu.
Asinakuthembela kakhulu kwii-bechmark okanye ngedatha yehardware epapashiweyo (ungaze ugqibe, iinkampani ziyathandabuza ukunika ulwazi olupheleleyo malunga neeterminal zazo).
Ndiyathetha ukuba ukuba iibhentshi azithembekanga, ayazi ne-hardware onayo. I-SGX530 inokuba namandla ngakumbi kune-Adreno 205 (ngobuchwephesha obuphezulu) kwesinye iselfowuni, kuxhomekeke kwimiba engaqhelekanga ukupapashwa njengokuphindaphindwa komsebenzi.
Phendula ku Begto
Iifowuni ze-Android eGuatemala sitsho
Kuya kufuneka sijonge zonke iimpawu kakuhle ukuze sibone ukuba yile nto siyikhangelayo na kodwa sisixhobo esihle esinomthamo omninzi kunye nokusetyenziswa kubonakala kufanelekile, imibuliso
Phendula kwiifowuni ze-Android eGuatemala
indawo yokuthengisa sitsho
»Ikhamera engaphambili ye-2MPx isebenza kakuhle kwimfonomfono ngevidiyo ngokusebenzisa ii -apps zemiyalezo.
ezizezinye endizizamile azisebenzi nge-2.2.2 🙁
kwaye uhlaziye !!!!!!!
Phendula kwindawo yokuthengisa
Mholweni. Ndikhuphele i-Skype kwaye ndenza iifowuni zevidiyo kuyo nayiphi na i-PC ngaphandle kweengxaki. Khange ndiqwalasele nantoni na, ividiyo ibone ngqo isandi, njlnjl ngaphandle kokwenza nantoni na. Zama eso sicelo ukubona ukuba kunjani….
Namhlanje ndifumene i-LG optimus emnyama yam kwaye xa ndibeka iSIM khadi, akukho nethiwekhi inokundifumana, oko kukuthi, ngaphandle kokugubungela. Andikwazi ukufowuna okanye ukufumana iifowuni
Ngaba oku kwenzekile nakubani na ??,